Researchers nwere ike iri elu nnukwu nnyocha ndị e mere na-efesa ha n'ime iche iche 'ndụ.
Ebe obibi nwa oge nnwale (EMA)-agụnye ime omenala nnyocha ndị e mere, mgbutu ha iberibe iberibe, ifesa ha n'ime ndụ ndị sonyere. N'ihi ya, nnyocha e mere na ajụjụ anyị nwere ike ịjụ N'oge kwesịrị ekwesị na ebe, kama na a ogologo ajụjụ ọnụ izu mgbe niile emezuola.
EMA e ji anọ atụmatụ: (1) collection of data na ezigbo ụwa gburugburu; (2) nnwale na-elekwasị anya na ndị mmadụ n'otu n'otu 'ugbu a ma ọ bụ nnọọ na-adịbeghị anya na-ekwu, ma ọ bụ asị; (3) nnwale ahụ nwere ike ịbụ ihe omume ndị dabeere na, oge nke dabeere na, ma ọ bụ enweghị usoro kpaliri (dabere na nyocha ajụjụ); na (4) ẹkụre multiple nnwale karịrị oge (Stone and Shiffman 1994) . EMA bụ ihe obibia-arịọ e ji facilitated site smart phones na ndị mmadụ na-emekọ ihe ugboro ugboro ofụri usen. Ọzọkwa, n'ihi na smart ntị na-juru n'ọnụ na sensọ-dị ka GPS na accelerometers-ọ na-esiwanye ike ịkpalite nha dabeere na ọrụ. Dị ka ihe atụ, a smart ekwentị nwere ike kenyere ịkpalite a nnyocha e mere ajụjụ ma ọ bụrụ na a respondent na-aga n'ime a akpan akpan obi.
Nkwa nke EMA na-omume ọma site n'ihe dissertation nnyocha nke Naomi Sugie. Ebe ọ bụ na 1970 na United States nwere n'ụzọ dị ịrịba ama mụbara ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na ọ imprisons. Dị ka nke 2005, banyere 500 na mmadụ 100,000 ọ bụla America nọ n'ụlọ mkpọrọ, a ọnụego nke ịtụ mkpọrọ elu karịa n'ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa (Wakefield and Uggen 2010) . The anya na ọnụ ọgụgụ ndị na-abanye n'ụlọ mkpọrọ emewo ka e nwee anya na ọnụ ọgụgụ ndị na-ahapụ ụlọ mkpọrọ; ihe dị ka 700,000 ndị mmadụ na-ahapụ ụlọ mkpọrọ kwa afọ (Wakefield and Uggen 2010) . Ndị a bụbu-omempụ na-enweta oké nsogbu n'elu ahapụ ụlọ mkpọrọ, na mwute ikwu na ọtụtụ ejedebe azụ n'ụlọ mkpọrọ. Iji ghọta ma belata recidivism, na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na amụma eso ụzọ mkpa ịghọta na ahụmahụ nke bụbu-omempụ dị ka ha re-na-abanye n'obodo. Otú ọ dị, ndị a data na-esi ike na-anakọta na ọkọlọtọ e mere na ụzọ n'ihi na bụbu-omempụ na-aka enwe ike ịmụ ihe na ndụ ha na-ajọ oké njọ. Mmesho na-eru nso na idokwa nnyocha ndị e mere ọ bụla ọnwa ole na ole na-atụ uche nnukwu ichekwa ndị Ọnọdụ ná ndụ ha (Sugie 2016) .
Iji na-amụ re-abanye usoro nke bụbu-omempụ na nnọọ ukwuu nkenke, Sugie were a ọkọlọtọ gbasara nke puru omume sample nke 131 ndị si zuru ndepụta nke ndị mmadụ n'otu n'otu na-ahapụ ụlọ mkpọrọ na Newark, New Jersey. O nyere onye ọ bụla soò na a smart ekwentị na ghọrọ a ọgaranya data collection n'elu ikpo okwu. Sugie eji na igwe inye abụọ iche iche nke nyocha. Nke mbụ, ọ zigara otu "ahụmahụ ụfọdụ nnyocha e mere na" mgbe a na-enweghị usoro họrọ oge n'etiti 9am na 6pm arịọ sonyere banyere ha ugbu a ihe omume na mmetụta. Nke abụọ, na 7pm, o zigaara a "kwa ụbọchị nnyocha e mere"-ajụ banyere ọrụ nile nke ụbọchị ahụ. Ọnụ abụọ ndị a nnyocha ndị e mere na-enye nkọwa zuru ezu na, longitudinal data banyere ndụ nke ndị a bụbu-omempụ.
Tụkwasị na nke a, nnyocha, na igwe dere ha ebe Mgbe ụfọdụ ma na-ezoro ezo ihe ndekọ nke oku na ederede meta-data. Ihe ndị a nile data collection, karịsịa ndị n'ezinụlọ data collection, edemede ụfọdụ usoro ziri ezi ajụjụ, ma Sugie si imewe edozi ha nke ọma. Sugie natara bara uru ụbụrụ bụ n'ebe onye ọ bụla soò na nke a data collection, na-eji ihe kwesịrị ekwesị nche nchebe, na nyeere sonyere gbanyụọ ala nsuso. Ọzọkwa, iji belata ihe ize ndụ nke amanye ngosi nke data (eg, a sobpona si ndị uwe ojii), Sugie nwetara a Certificate banyere idebe ihe nzuzo si gọọmenti etiti ọchịchị tupu ọ bụla data e anakọtara (Beskow, Dame, and Costello 2008; Wolf et al. 2012) . Sugie si na usoro e enyocha site a-atọ ndị ọzọ (ya mahadum ulo oru Review Board), ha gaa n'ebe dị anya gabiga ihe a chọrọ site ẹdude ụkpụrụ. Dị ka ndị dị otú ahụ, m na-eche ya ọrụ na-enye a bara uru nlereanya ka ndị ọzọ na-eme nnyocha chere ihu ndị a ụdị ihe ịma aka; -ahụ Sugie (2014) na Sugie (2016) n'ihi na a ntụle zuru ezu.
Ikike ka e meere ma jide ezigbo ọrụ dị mkpa ka a nke ọma reentry usoro. Otú ọ dị, Sugie chọpụtara na ya sonyere 'ọrụ ahụmahụ ndị n'ịgba, nwa oge, ma sporadik. Ọzọkwa, n'ime ya soò na ọdọ mmiri, e nwere anọ dị iche iche ihe nakawa etu esi: "n'oge opupu" (ndị na-amalite ịchọ ọrụ ma mgbe ahụ kwụsịrị ịga ọrụ ahịa), "persistent search" (ndị na-eji ọtụtụ ihe banyere oge ịchọ ọrụ) , "pụtara ugboro ugboro ọrụ" (ndị na-eji ọtụtụ ihe banyere oge na-arụ ọrụ), na "ala nzaghachi" (ndị na-adịghị azaghachi nnyocha ndị e mere mgbe nile). Ọzọkwa, Sugie chọrọ ịghọta ihe ụfọdụ banyere ndị na-akwụsị ịchọ ọrụ. Ọ pụrụ ịpụta na ndị a searchers inwe nkụda mmụọ ma dara mbà n'obi na-emecha kwụsị ịga nke ọrụ ahịa. Maara nke a ga-ekwe omume, Sugie eji ya nnyocha ndị e mere na-anakọta data banyere obi ala nke sonyere, na ọ hụrụ na "n'oge opupu" otu ghara ịkọrọ ọkwa dị elu nke nchegbu ma ọ bụ obi ụtọ. Kama nke ahụ, ndị na-abụghị bụ ikpe: ndi wee na ịchọ ọrụ kọrọ ọzọ mmetụta nke nsogbu mmetụta uche. All nke a ezi-na-grained, longitudinal banyere omume na mmetụta uche ala nke bụbu-omempụ dị mkpa bụ nghọta ka ihe mgbochi ha na-enwe na easing ha mgbanwe azụ n'ime otu. Ọzọkwa, ihe a niile ezi-na-grained zuru ezu ga-e Agbaghara na a ọkọlọtọ nnyocha e mere.
E nwere atọ n'ozuzu ihe site n'ihe Sugie ọrụ. Akpa, ọhụrụ bịara ibi nwatakịrị na-arịọ na-emecha ihe dakọtara na omenala ụzọ nke ụfọdụ; -echeta, na Sugie were a ọkọlọtọ gbasara nke puru omume sample si a na-kọwaa etiti bi. Nke abụọ, elu ugboro, longitudinal nha nwere ike ịbụ bara uru karịsịa n'ihi na amụ-elekọta mmadụ ihe mere ka o nwere oge ufodu na-akpa ike. Nke atọ, mgbe e mere na data collection na-achọkwa na dijitalụ metụtara, ọzọ usoro ziri ezi mbipụta nwere ike ibili. Aga m azụtara research ụkpụrụ ọma na ihe nkowa n'Isi nke 6, ma Sugie ọrụ na-egosi na ndị a okwu na-addressable site akọ na uche na echiche na-eme nnyocha.